नेपाल आज | केपी लम्पसारवादी होइनन्, लालबाबुले मालिकका अगाडि बिन्ती बिसाए
केपी लम्पसारवादी होइनन्, लालबाबुले मालिकका अगाडि बिन्ती बिसाए
काठमाडौं । अहिले शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई ‘लम्पसारवादी’ भनेको, मीनेन्द्र रिजालले ‘नाकाबन्दी हो भन्न किन नपाउने ?’ भनेर बोलेको कुराहरु छन् नी, यसैलाई भन्छन् राजनीतिमा नेताहरुले रङ फेरेको । नेताहरुले रङ फेर्छन् भन्ने त धेरैले सुनेका छन् । रङ फेरेको राम्रो उदाहरण हालै देउवा र मीनेन्द्रको भनाइ हुन् ।
केपी ओलीले यसपटक के गरे त भन्दा जनकपुरमा मोदीको स्वागत गरे । मुक्तिनाथमा सवारीमन्त्री पठाइदिए । पशुपतिको ढोका खोलिदिए । अरु के गरे र ? उनी लम्पसार परेका छैनन् ।
अब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । जनकपुरमा केपी ओलीले स्वागत गरे । उत्तरकोरियाको सर्वोच्च नेता दक्षिण कोरिया जाँदा त स्वागत भयो भने मोदी नेपाल आउँदा उनको स्वागत नगर्ने भन्ने हुन्छ ? बैगुनीलाई गुनले मार्नु भन्ने कुरा ओलीले लागू गरे । सत्रु राष्ट्रकै प्रधानमन्त्री आउँदा पनि कुटनीतिक व्यवहारमा सत्कार नै गरिन्छ । यसलाई लम्पसार भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि भारतसँग हामीले मित्रता नै बढाउने हो । नत्र त भारतसँग युद्ध घोषणा गर्नु पर्यो । नेपालको कुनै देशसँग युद्ध गर्ने नीति नै छैन ।
केपी ओली भारत जाँदा समकक्षी मोदीलाई नाकाबन्दी किन लगाएको ? भन्ने प्रश्न गरे भन्ने कुरा बाहिर आयो । कुटनीतिमा यस्तो प्रश्न सोधिदैन । यस्तो कुरा कसले किन बाहिर ल्यायो, उसैले जानोस् ।
मालिकलाई बिन्ती बिसाएको
२८ वैशाखमा मोदी जनकपुर आउँदा उनको अभिनन्दनका क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘नेपालको संविधान विभेदकारी छ’ भने । राउतले संविधान पढे राम्रो हुन्थ्यो । खासमा नेपालको संविधान कसैसँग पनि विभेदकारी छैन । व्यवहारमा विभेद छ, संविधानमा छैन । मधेसी अपहेलित छन् त्यो सामाजिक कुरा हो संवैधानिक होइन । मधेसका डोमले छोएको पानी भूमिहार, राजपुत, यादव आदिले पिउँदैनन् । पासवानहरुलाई पनि विभेद गरिन्छ । यो विभेद चाहिँ छ ।
तर संविधानमा विभेद छैन । अब लालबाबुले मोदीका अगाडि मधेसी हेपिए, संविधान विभेदकारी छ भन्नु भनेको आफ्नो मालिकलाई बिन्ती बिसाए जस्तो भयो । नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सधै बिग्रिरहोस भनेर लालबाबुले छेस्को होलेका हुन् ।
जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ, यिनले अहिलेसम्म जेजे गरिरहेका छन् त्यो नेपाली जनताको पक्षमा छ ।
भारत व्यापारी हो
भारतले के गर्ला ? नेपालको विकासमा सघाउला त ? यो प्रश्नको जवाफ हो भारतले केही पनि गर्दैन । मै मन्त्री हुँदा नौमुरे जलविद्युत आयोजना बनाइदिने भन्यो, बनाएन । महाकाली सन्धि गरेर पञ्चेश्वरको बनाउने भनियो, २२ वर्ष भयो ,बनेन । हुलाकी राजमार्ग बनाएन । अरुण तेस्रो पनि बनाउछ भन्ने लाग्दैन । कर्णाली –चीसापानी बनाउन दिँदैन । अपर कर्णाली पनि बनाउँदैन ।
भारतले के गर्छ त भन्दा एम्बुलेन्स, बस र दुई चार वटा विद्यालयका भवन चाहिँ बनाइदिन्छ । भारत भनेको व्यापारी हो । उसले नेपालसँग व्यापार गर्छ । फाइदा लैजान्छ । भारतले नेपालाई दिने होइन लिने काम गर्छ । अर्को कुरा भारतलाई उकातर्फि फाइदा नहुने काममा हातै हाल्दैन । बराबरीको फाइदाले पनि हुँदैन उसलाई ।
पार्टी एकताको कुरा चलिरहेको छ । केपी ओली एक्लै हिँड्न खोजेको आरोप माओवादीले लगाएको छ । धेरै नेताहरुमा पार्टी एकता पछि खाइपाइ आएको पद जाला भन्ने डर छ । त्यो सुरक्षित होस भन्ने चाहना राख्छन् । त्यो चाहना प्रचण्डमा पनि छ । पार्टी एकता होला जस्तो देख्छु ।
केपी ओलीको शासन शैली नराम्रो छैन । कन्फिडेन्ट लेभल राम्रो छ । जे जे गर्छु भनेका छन् त्यो गर्ने हिम्मत उनमा छ । यस्तो अरु प्रधानमन्त्रीमा खास देखिनँ । नाकाबन्दीकै बेला पनि नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत भ्रमणमा जाँदिन भने । गएनन् । उनले जे जे गर्छु भनेका छन् त्यो गर्छन् जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म हेर्दा नेपालका राम्रा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली पर्छन् । एमाले होस वा माओवादी, यी दुई दलकै हातमा हुनेछ अबको पाँच वर्ष नेपालको राजनीति ।
चीन तिरको सम्बन्ध पनि पहिलेभन्दा राम्रो होला भन्ने आशा गरेको छु । चीनले नेपाल मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन, भारत जस्तो दुष्ट छैन ।
(नेता नेपालसँग भएको कुराकानीमा आधारित)
सरकार–देशको रोजगारी विदेशीलाई देऊ, नेपालीलाई खाडी पठाऊ